Akụkọ - N'ụzọ ndị dị a canaa ka a ga-esi jiri igwe ọrụ laser laser taa?
Laser ọnwụ bụ dochie omenala n'ibu mma na-adịghị ahụ anya doo. O nwere njirimara nke oke nkenke, ọsọ ọsọ ọsọ, na-ejedebeghị na ịcha usoro, ụdị akpaaka, ịchekwa ihe, ịcha mma, na ụgwọ ọrụ dị ala. Ọ ga - eji nwayọ nwayọ ga - eme ka ọ dị mma. Ngwongwo nhazi ihe eji eme ihe.
Gịnị bụ nzube nke igwe ọkụ laser? Ebumnuche nke igwe laser bụ ihe ọ bụla karịa: ịcha, kpochapu, belata ihe eserese, na okwu dị mfe, ịcha.
Uru nke Guohong eriri laser ịcha igwe:
1. High nkenke na warara nchawa;
2. Ọsọ ọsọ, elu-ala ọnwụ;
3. Obere ihe na-ekpo ọkụ, ọ dịghị nrụrụ igwe nke obere akụkụ;
4. Nhazi abụghị naanị na eserese;
5. Ọ nwere ọtụtụ ngwa na ike ijikwa dị iche iche ihe na na.
Kedu ihe ndị a ga-egbutu:
Nhazi nke igwe anaghị agba nchara, carbon steel, copper, alloy steel, silicon steel, spring steel, aluminium, alloy alloy, galvanized sheet, galvanized zinc sheet, pickling sheet, gold, silver, Qin na mpempe akwụkwọ ndị ọzọ na ọkpọkọ ọkpọkọ.
Mpaghara ngwa nke igwe ahihia laser: nhazi ihe mpempe akwụkwọ, ihe ngosi akara ngosi, igbe eletriki na mmepụta ụlọ ọrụ eletriki, ụlọ ọrụ injinia, ngwa eletriki, akụkụ dị iche iche dị iche iche, arịa kichin, ngwongwo ụlọ, ụgbọala, igwe ọrụ ugbo, akụrụngwa ọgwụ, ụgbọ mmiri, aerospace , Lighting, ụlọ ọrụ nchedo gburugburu ebe obibi, ntupu waya, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, akụrụngwa mgbatị, nhazi akwụkwọ mpempe akwụkwọ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ngwa ngwa a sara mbara nke ukwuu, ọ bụkwa nhọrọ nke ụlọ ọrụ nrụpụta na nhazi.